Home Wararka Shirweyne lagu heshiisiinayo Shabab & Ictisaam oo Hargeysa ka furmay
[Video] Shirweyne lagu heshiisiinayo Shabab & Ictisaam oo Hargeysa ka furmay
Shirka Ictisaam ee Hageysa wax uu ku soo beegmay xilli xasaasi ah oo dalka Doorasho ka socoto, iyadoo waqooyiga ay dhawaan doorshooyin ka dhaceen. In dadku isha ku hayaan oo suaalo badan iska waydiiyaanna waa feejignaan weyn oo bulsheed.
Kaliya in Hargeysa noqoto xulashada goobta kulanka xeligan ayaa waxay dhalineysaa welwel weyn. Burburka siyaasadeed iyo bulsheed ee dalka ka dhacay wax uu meesha ka saaray is aaminaaddii, taa oo gaarsiisan heer in wax la wada yeesho aan kalsooni badan lagu qabin.
Dagaal diimeedyada, halaagga Shabaab iyo foolxumada magaca diineed lagu gaystay wax uu meesha ka saaray kalsoonida lagu qabay Wadaadka Soomaaliga ah. Kala shakigaa ayaa keenaya xasillooni darrada siyaasadeed ee muddada dheer jirta, taana waxaa ka dhashay fowdo iyo xasillooni darro ammaan.
Alshabaab oo la hubo kadib markii ay Taalibaan ku guuleysteen inay Afganistaan dib u qabsadaan ayaa shabaabkuna uu dib isu habaynaa si dalka uu la wareego iyo mid taa fashilkeeda ka dhalanaysa oo ah in dib loogu laabto dagaalladii qabaailka ama in kooxo diimeedyo cusub oo awood ciidan lihi soo baxaan.
Ictisaam in kasta oo ay saaxadda siyaasadda ku fashilmeen oo magacooda ay aad u dileen garabka hubaysan ee Shabaab haddana wali waa awood dhaqaale iyo mid diineed oo mar kale saamayn siyaasadeed iyo mid ciidan yeelan karta. Ictisaam ayaa dadaal ugu jirta inay Baarlabaanka JFS ku soo biirsadaan ilaa 80 xildhibaan.
Dowladda Farmaajo oo ay u arkaan mid aay iyaga leeyihiin oo Fahad Yasin masuul uga yahay ayaa kooxda Ictisaam waxay go’aansatay in aay noqoto xisbi siyaasadeed hanan kara hoggaanka Dalka taasoo aay weliba rumeysan yihiin in Somaliland aay keeni karaan haddii aay xukunka ku guuleystaan.
Shirka Hargeysa ayaa laga leeyahay laba ujeeddo:
In la heshiisiiyo xal siyaasadeedna lagu dhammeeyo dagaalka u dhexeeyay labada garab ee Ictisaam & Shabab.
In loo diyaargaroobe sidii loo heli lahaa dhaqaale aay uga guuleystaan kuraasta ugu badan ee labada aqal.
Waxaa in dhaweydba baraha bulshada aay isku marinayeen labada garab dacaayado iyadoo labada dhinac aay midka kale ku eedeyneysay aqoon darro diimeed.
Shabab ayaa afartii sano ee la soo dhaafay waxay heleen dhaqaale aad u badan kaasoo aay ka heleen ganacsatada Muqdisho iyo Dekedda Muqdisho.
Ictisaam oo weli rumeysan fikirka xagjirka ee Shabaab iyo halaagga dhalay waxaa hubaal ah in ay salka dhulka ku dhufan doonaan oo si foolxun saaxadda uga bixi doonaan. Waayo shababka iyagaa dhalay oo weli culimo u ah, waxaana wax lagu dilaa waa fadwooyinkooda.
Weligood Ictizaam ma oran war waan khaldannay annaagaana ku shubnay dhallinyaradaan fekerkaan kaligii islaamka ah, hadda beri baanu nahay waxaana shacbiga u cadeyneynaa inuu yahay feker khalad ah oo aan diinta islaamka meelna ku lahayn.
Halka hoose ka daawo dagaalka Ictisaam iyo shabab ee Baraha Bulshada